Afqudhac ayaa ka jaabay Hadal ka soo yeedhay Kooxda Al-Shabaab | maakhir.com
Afqudhac ayaa ka jaabay Hadal ka soo yeedhay Kooxda Al-Shabaab
Garoowe:- Madaxwayne Xigeenka Puntland Xasan Daahir Maxamuud (Afqudhac) ayaa ka ajwaabay hadalkii ka soo yeedhay Kooxda Al-Shabaab isaga oo sheegay inay ahaayeen Dadkii fakaasi gaystay kuwa doonaya inay wiiqaan Nabada Puntland,hadalkaasi ayuu jeediyay Afqudhac maanta mar uu war baahinta gudaha la hadlayay.
Madaxwayne Xigeenka Puntland ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dhamaan dadkii masiibadaasi haleeshay isaga oo sheegyay in loo fidiiyay gurmad Deg Deg ah dadkaasi oo wax lagu tarayo kuwaasi oo uu sheegay inay gurmad lixaadle u fidiyeen Bulshada ku dhaqan Deegaanka Bosaaso.
Afqudhac wuxuu kaloo uu shaaca ka qaaday in ay amaro ku siiyeen ciidamada amaanka in ay Puntland oo dhan ka bilaabaan Howlgalo Guri-guri loogu sameynayo luguna soo qabanaya dadka u adeegaya kooxahaasi falkii xalay dhacay ka danbeeyay isaga oo waliba aad ugu cel celiyay inay jiraan dad laga shakiyay inay falkaasi lug ku leeyihiin oo lagu raad joogo.
Mr Afqudhac ayaa sheegay inaanay marnaba Puntland aanay Mawqifkeeda hoos uga degayn taasi oo ah inay la dagaalamaan cid alaale cidii xidhiidh la leh Kooxaha Al-Shabaab oo ah Buu yiri kuwa Somaliya kula wareegaya qoriga Dabkaleh.
Xasan Daahir waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in Falkii xalay laga soo maleegay Gobolada Koonfurta Somaliya kuwaasi oo la doonayay in Nabada Puntladn lagu maja xaabiyo.
Gebagebadii Mr Afqudhac waxa uu sheegay in dhamaan xaafadaha Magaalada Bosaaso la dhigayo Ciidan ilaaliya Amaanka kuwaasi oo la socda dhaq dhaqaaqa cid alaale cidii wada falal Amaan daro ah.
Hadal Afqudhac ayaa waxa uu ku soo beegmayaa Saacada uun markii Kooxda Al-Shabaab ay bog Entarnet- oo ay leeyihiin lagu soo daabacay inay falkii xalay ka danbeeyeen kooxahaasi iyaga oo waliba Baaqyo udiray Shacabka iyo Maamulka Puntlandba.
« Al-Shabaab oo sheegtay inay ka danbaysay Qaraxii Bosaaso ka dhacay
Maamulka Gobolka Bari ayaa sheegay inay qaraxii Bosaaos u qabteen Dad loo xaglinayo inay ka danbeeyeen »